Kufananidza pakati peiyo Dash, Iyo Musoro Wefoni uye AirPods | IPhone nhau
Miguel Hernandez | | IPhone zvishongedzo, iPhone
Apple's wireless mahedhifoni akagadzira tarisiro yakawanda, haigone kuve shoma, zana muzana maasifoni asina waya ayo Apple inotarisira kugadzira chishongedzo chakakwana che iPhone yedu. Nekudaro, kuenzanisa kunosemesa, asi isu tinovada. Mune ino kesi, isu tinoziva kuti Samsung yakambopa chigadzirwa chakafanana. Tichatarisa pane chigadzirwa chakagadzirwa na Bragi, inonzi The Dash. Saka ngatitarisei kuenzanisa uku pakati peThe Dash, Iyo Headphone uye AirPods, iwo matatu akasarudzika, asina waya mukati-nzeve mahedhifoni ari parizvino anomiririra chigadzirwa chigadzirwa. Iyi enzaniso ichapa zvese mukana wezvigadzirwa nemitengo yavo yekupedzisira uye kuenderana, usarasikirwa nazvo.
Mukuenzanisa uku tinowana iwo mapoinzi ayo Bragi afunga kufunga kuenzanisa izvi zvishandiso. Tinogona kuwana yepamutemo enzanisa ye Bragi pane yayo yepamutemo Facebook saiti, zvisinei, isu takasarudza kuiongorora nokungwarira uye kuunza nayo muchiSpanish, kuti iwe ugone kuzvisarudzira. Ngatizvitarisei, iyo chaiyo fananidzo inomuka pakati peiyo The Dash, iyo isina waya mukati-nzeve mahedhifoni anopiwa nefemu. Bragi, uye maAirPod, iyo imwe nzira isingadhuri uye iine mashoma mashandiro kubva kuApple. Pakati pezvikamu tichawana zvinotevera: Makaralı, kushomeka kwemvura, kuchenesa odhiyo, kuteedzera kwemimhanzi, mutambi wemimhanzi, inovandudzwa sisitimu yekushandisa, hupenyu hwebhatiri, hukuru hwakasiyana uye zvakanyanya kukosha, mutengo.
Isu tagara tichikurumidza kutaura kuti mutengo unopihwa neApple kune aya mahedhifoni haadhure, kunyanya kana tichifunga dzimwe nzira dziri pamusika. Zviongorore pachako kana ichi chiri chokwadi. Tiri kuzokusiya iwe pazasi pegrafu iyo yatakagadzira mairi kwatinoona iwo ruzivo rwakafanana nerwemukuru Bragi, asi akaendeswa kunharaunda yedu yemutauro. Usapotsa iwo iwo ruzivo, isu tichaiongorora zvakanyanya.
Iyo chinangwa data rekuenzanisa
Chekutanga pane zvese isu tichamira pa Kubvumirana kweBluetooth. Kunyangwe iwo maMweya Pods pasina mubvunzo achazotarisa pane odhiyo kubva kuInternetPlay uye NFC pairing, ivo zvakare vane kuzara kuzere kwechero chishandiso chinoburitsa odhiyo kuburikidza neBluetooth. Zvingava sei neimwe nzira, Samsung mahedhifoni zvakare ane ino kuzere kuenderana. Nekudaro, mune anotevera mashandiro uye maficha, Samsung mahedhifoni anotanga kuwana mukana unonzwisisika pamusoro pevanokwikwidza, pasina kupokana nekukunda kuri pachena.
Iwo maAirPod haapi chero kuramba kwemvura, kana kutaura nezve ziya, izvo zvinobva zvarasa ivo zvemitambo. Kune rimwe divi, ivo havana ruzha rwekunatsa software masisitimu, kunyangwe hazvo iyo AirPods ine yavo yekufema system iyo inogara nhaka kubva kuEarPods uye dhizaini inoita nhanho dzayo dzekutanga nezwi. Kana zviri zvekutevera kugwinya, ndechimwe chinhu matinorasa maAirPod, kunyangwe hazvo, maAirPod asingabatsiri pasina chishandiso chavakabatanidzwa, uye nezvekutevera kusimba, iyo iPhone neApple Watch vanoziva zvakawanda. MaAirPod haanawo mutambi wemukati, chimwe chinhu chavanacho neThe Dash, kuti vakwanise kuzvishandisa vakazvimiririra. Pakuenderana nesaizi, Iyo Dash inosanganisira madiki, epakati uye makuru saizi maadapter enzeve dzakapfava, nepo maAirPod aine dhizaini yakasarudzika, iyo kunyangwe ichinakira vanhu vazhinji, haisi yevamwe vanopedzisira vairasa.
Isu tinoenda kuzvikamu zviviri zvekupedzisira, uko maAirPods kuyedza kuyera chiyero. Chekutanga ndiwo mutengo, Iyo Dash inodhura isingasviki pane € 299, mutengo uri pakakwirira kweakanyanya akasarudzika mahedhifoni, mabasa mazhinji ane mutengo, asi chokwadika, pamwe zvese zvatinoda kuteerera mimhanzi zvakanaka. Pane rimwe divi, AirPods inodhura € 170, ingangoita hafu yemakwikwi avo, chikonzero chine musoro nei vachipa mashoma mabasa. Chikamu chekupedzisira ibhatiri, nepo Iyo Dash ichipa 4h neayo on-the-go recharges, iyo AirPods inopa 5h yekuzvitonga, pamwe neiyo yebhokisi rinotakurika.
Inguva yekuti iwe uzvitongere wega uye ugogoverana mune zvakataurwa izvo zveanopihwa mahedhifoni zvinoita senge iri nani sarudzo kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Kufananidza pakati peDash, Iyo Musoro wefoni uye AirPods
Ngatione, pane munhu anganditsanangurire icho The Dash naBragi chine chekuita neSamsung ??? Iyo Dash ndiyo maBragi brand mahedhifoni ayo andinoziva ... Samsung haina chekuita nazvo. Iwo ma earbuds eiyo yekuSouth Korea brand inonzi Samsung giya iconX. Ndokumbirawo kuti mumwe munhu anditsanangurire zviri kuitika pano!
Kubva pandima yekutanga unoona kuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka. Sekutaura kwekutanga, "samsung"?. Hapana chekuona! Iwe unogona sei kunyora chimwe chinhu usingatombo ferefeta hushoma? Uye wobva waedza kuenzanisa neiyo Dash, apo muchokwadi ingangopesana neHedifoni. Kune zvimwe zvese, iwo rugwaro harubatsire chero chinhu .. Ah hongu, kushandurwa kwemufananidzo, asi ini zvirinani kuenda kunobva.